समाज बनाउने अभिभारा बोकेकाहरुलाई नमन | www.sidhakurausa.com
समाज बनाउने अभिभारा बोकेकाहरुलाई नमन
सीधाकुराले २ बर्षदेखि लगातार भुकम्प पीडित राहत अपचलनको बिषयमा आलोचना गर्दै आएका व्यक्तिले आज न्युयोर्कमा चमत्कार देखाए । ती चमत्कारिक व्यक्ति हुन -नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति गोरख (आनन्द) बिस्ट । असल कामको प्रशंसा गरौँ भनेर आज साँझ सीधाकुराले उनलाई फोन गर्दा हत्तरपत्त फोन उठाए र हास्दै भने -बिनोदजी आज कताबाट? बधाई र शुभकामना दिउ भनेर फोन गरेको जबाफ दिनासाथ सभापति बिस्टले भने -कहिले गाली खाइन्छ, कहिले ताली, यो स्वाभाविक कुरा हो ।
शालीन राजनीति गर्ने मान्छे हुन सभापति बिस्ट । लप्पन छप्पन गर्न उनलाई आउदैन तर कार्य समितिमा भएका छट्टु साथीहरुको कारण उनी बिबादमा परेका थिए । सीधाकुराले सभापति बिस्ट प्रमुख व्यक्ति भएको कारण सबै जस अपजसको भारी उनले बोक्नु पर्ने भन्दै २ बर्ष तिब्र आलोचना गर्नु परेको थियो ।
जब रिजवूडमा पुराण शुरु भयो तब फेरी सभापति बिस्टको सम्झना नगरीरहन सकिएन । ठुलो संगठनको नेता भएको नाताले कतै ठुलै रकम पो पुराणलाई झार्छन की भनेर दिन रात फ़काउदै, गाली गर्दै, थर्काउदै सभापति बिस्टलाई अनुनय बिनय गरिदै थियो, हिजो राति मात्र कसो यिनले २ लाख भन्दा बढी आर्थिक दान नल्याउलान भन्दै थियौं हामी, आज त ल्याई हाले । नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका २ सय ३० जना प्रतिबद्द, कटिबद्द कार्यकर्ताहरुको सहयोग जुटाएर सभापति बिस्टले पुराणमा १ लाख २५ हजार ५ सय ५५ डलर र ५५ पेनी झारेर अमेरिकाको नेपाली समाजको सबै भन्दा ठुलो संगठनको ठुलो काम देखाए । रिजवूड समाजले आयोजना गरेको पुराणको लागि सबैभन्दा ठुलै दान टक्र्याए, ठुलो संगठनको इज्यत जोगाए । हामीले चाहेको पनि यहि थियो । ठुलो मान्छेले सानो सहयोग गर्लान र हाम्रो नाक काट्लान भन्ने कता कता डर पनि थियो, सभापति बिस्टले त्यसो हुन दिएनन । उनले समितिको तर्फबाट सारा सदस्यहरुको इज्यत राखे । समितिको इज्यत बढाए, उनी र समिति दुबैलाई हार्दीक धन्यवाद, शुभकामना नभनी रहन सकिन्न । ठुलो मान्छेको ठुलै चाला भनेको यहि हो ।
जसरी बिस्टले समितिको तर्फबाट आज ठुलो दान जुटाएर पुराणको ढुकुटी भर्न सफल भए त्यस्तै अस्ति सबैलाई ठुलो ठुलो दान गर्नु पर्छ भनेर प्रेरणाको श्रोत बन्दै प्रबासी नेपाली मंच अमेरिकाका निबर्तमान अध्यक्ष संजय थापाले १ लाख ११ हजार १ सय ११ डलर र ११ पेनी दान गरेर सबै दाताहरुलाई हौस्याएका थिए । मंचको तर्फबाट यति ठुलो रकमको सहयोगको बाचा नबाधेको भए आज ठुल्ठुला रकम पुराणमा झर्ने थिएन । पुराणको ठुला दाताहरुलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने मंच र थापा नै हुन । मंच र थापाको प्रेरणा अविस्मरणीय छ, मंचको ठुलो दानले उत्प्रेरित भएर समाजसेवी तथा ब्यबसायी बेद प्रसाद खरेलले ६६ हजार ६ सय ६६ डलर र एक पेनी दान गरे । त्यसभन्दा अघि नै राजेश भट्टले ७५ हजार १ डलर दान गरेर पुराणको ठुलो खाता खोलेका थिए ।
आजका ठुला दाता मध्ये नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका त संस्थागत रुपमा ठुलो हो तर व्यक्तिगत रुपमा अर्का मनकारी व्यक्ति श्री पराजुलीले १ लाख १ हजार १ सय ११ डलर दान गरेर व्यक्तिगत खाता सबैभन्दा ठुलो खोलेर देखाए, यो धनको खाता मात्र होइन सबै भन्दा ठुलो मनको खाता पनि हो । धन भएकाको मन हुँदैन, मन भएकाको धन हुँदैन भन्ने नेपाली उखान टुक्का पनि रिजवूडको पुराणका ठुला दाताहरुले उल्ट्याएका छन । धन पनि उनीहरुसंग रहेछ मन पनि ।
अमेरिकाको नेपाली समाजमा पुराण लाउने र मन्दिर तथा सामुदायिक भवन बनाउने एउटा ठुलो लहर चल्यो । मनकारीहरुले कती धन पोको पारेर राखेका रहेछन भन्ने कुराको मुख ह्वाङ्ग खुलेको छ । यो समाज रुपान्तरणको एउटा रुप हो । सीधाकुराले बिगत १५ बर्षदेखि अमेरिकाको नेपाली समाजमा खोज्दै आएको कुरा पनि यहि हो, यहीं बस्नु छ भने यहि कीन मन्दिर, सामुदायिक भवन, घाट, सब दोहन गृह, शब् घर, नेपाली भाषा पाठशाला जस्ता कुराहरुमा समाजलाई नघच्घच्याउने? हाम्रो मिसन स्टेटमेन्ट बिस्तारै पुरा हुँदै गएको अनुभूति भएको छ, यो सारा नेपाली आप्रबासीहरुको लागि खुशीको कुरा हो । धन भए पछि जग हाल्न सहज हुन्छ तर धन नै सबै कुरा चाहि होइन ।
दाताहरुले समाजका लागि चाहिने कुराहरुको लागि ठुलो दान गर्ने भाखा राखेका छन, यत्रो रकम उठेको वा दिएको कुरा अहिले चर्चित छ ।
ठुलो दान दिंदा नाक ठुलो पार्नु स्वाभाविक हो तर आयोजकहरुले दाताहरुलाई २ बर्ष भित्रमा बोलेको रकम चुक्ता गर्न भनेको कुरा अहिले साँझ मिलन शाहीले सीधाकुरालाई न्युयोर्कबाट जानकारी गराएका छन । यो बारेमा आजका ठुला दाता द्वय समितिका सभापति बिस्ट र मनकारी व्यक्ति पराजुलीलाई सोधेम -त्यो पुरै नगद हो की उधारो? वहाँहरुको जबाफ छ -१ बर्ष भित्रमा बोलेको बाचा पुरा गर्छौं । बाचा पुरा गर्नु भयो भने त फेरी सलाम ठोक्नु परिगो, बाचा पुरा गर्नु भएन भने त सीधाकुराको काम वहाँहरुको पुच्छर बटार्ने नै त होला नि, हामीलाई त्यस्तै लाग्छ नी । रिजवूड समाजका पूर्ब उपाध्यक्ष मिलन शाहीले भने -बोलेको रकम तिरेनन् भने सीधाकुरा लाइ दिनु पर्ला दाताहरुलाई । २४ घण्टा बोलेको दान तिर भनेर सीधाकुराले पुच्छर निमोठे पछि दाताहरुले नतिरी सुखै छैन । बोलेको कुरा पुरा नगर्ने नेपाली समाजको चरित्र भएको छ । त्यो चरित्र उदाङ्गो पार्ने काममा सीधाकुरा धेरै सक्षम भएकाले बोल कबोल गर्नेहरुलाई पनि कहाँ सजिलो छ र? शाही भन्छन ।
पुराणले त्रिपक्षीय चुनौती थोपरेको छ, दाताहरुलाई बोलेको बाचा पुरा गर्ने, आयोजकलाई बोलेको रकम बेलामा तिर भनेर अनुनय बिनय गर्ने, अनि सीधाकुरालाई बोलेको रकम नतिर्नेहरुको पुच्छर निमोठेर तिर्न लाउने । हाम्रो नेपाली समाजको यो त्रिपक्षीय लफडा १-२ बर्ष पछि नदोहोरिने गरी सोच बिचार गर्न साना ठुला सबै दाताहरुलाई सीधाकुराको आग्रह छ ।
नभए त सबैलाई थाहै छ सीधाकुरा । की कसो दाता महानुभावहरु? आज लाख लाख झर्दा एक ताली बजेको छ तर बोलेको रकम नतिरे पछि लाखौँ गाली बर्सिने तर्फ सबैलाई सजग रहन सीधाकुराको बिनम्र आग्रह छ ।
सीधाकुराले बोस्टन पुराणको चन्दा रकम १६ लाखको हाराहारीमा रिजवूड पुराणको रासी पनि त्यति नै पुर्याउने लक्ष राखेकोमा मिलन शाहीका अनुसार त्यहि हाराहारीमा पुग्न आटेको छ, हेरौं १२ बज्यो अब कति पुग्छ आउलानी?